सर्प समात्ने महान बुबा छोरि , “अ’जिङ्गरले पनि टो’क्यो तर ड’र मानिन” (भिडियो सहित) – Hamro24News
July 11, 2021 adminLeaveaComment on सर्प समात्ने महान बुबा छोरि , “अ’जिङ्गरले पनि टो’क्यो तर ड’र मानिन” (भिडियो सहित)
चितवनका यमलाल भण्डारीले सर्प समात्न थालेको करिब पाँच वर्ष भयो । ४४ वर्षीय यमलालका तीन छोरी छन्। दुई वर्षयता बाबुसँगै पाइला मिलाइरहेकी छन् उनकी ठूली छोरी खुश्बु। बुवाको काम देखिरहेकाले खुश्बुलाई सर्पको संसारबारे चासो बढेको हो। अहिले म १८ वर्षकी भए ‘सर्प उद्धारको काम गर्छु’ भन्दा जम्मा १६ वर्षकी थिइन्। उमेरको कुरा एक ठाउँमा थियो, यमलालले अर्को पनि कारण देखाउँदै उनलाई हप्काउन थाले, ‘कहाँ छोरीहरूले सर्प समात्ने? हुँदैन। यो त निकै गाह्रो र जोखिमपूर्ण काम हो।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
खुश्बुले प्रतिकार गरिन्, ‘किन नहुने छोरीहरूले? छोरीको प्रश्नले यमलाल नाजवाफ भए। उनैले त ‘छोरीहरूले गर्न नसक्ने केही छैन, आफूलाई कहिल्यै कम नआँक्नु’ भन्दै आफ्ना तीन छोरी हुर्काएका थिए। पछिल्लो समयमा सामाजिक संजालमा निकै नै भाइरल भएका छन् चितवनका बुबा छोरि। जसले जस्तो अवस्थामा पनि स’र्पको उद्यार गर्ने गर्दछन। जन्म लिएपछि जसलाई पनि बाच्ने अधिकार हुन्छ त्यसलाई मा’र्न हुदैन भनि उनिहरु श’र्पको उ’द्यार गर्न लागेका हुन्। १८ वर्षे शाहासी युवती खुश्बु भण्डारीले स’र्प च्या’प्प समात्दै धेरै मान्छे बचाउदै आइरहेकी छिन्।
खुस्बु र उनको बुबालाई स’र्पको उद्धार गर्नको लागि धेरै ठाउ देखि फोन आउँने गर्दछ। खुस्बुले जस्तो अवस्थामा पनि जस्तो स’र्पको पनि उद्धार गरेकि हुन्छिन। मलाई स’र्प देखि धेरै नै डर लाग्थ्यो बुबाको साहस र हिम्मत देखेर पनि मेरो पनि हिम्मत आयो बुबालाई केहि गरेन मलाई पनि त केहि गर्दैन होला जस्तो लाग्यो र हिम्मतका साथ् मैले पनि स’र्प समात्न सक्ने भए। पुरा जानकारी भिडियो हेरर थाहा पाउनु होस्।
आज साउनको पहिलो सोमबार, शिव मन्दिरहरु सुनसान